Malware nke ga - ehichapụ gị FSX na FSXA
Malware nke ga - ehichapụ gị FSX na FSXA 3 afọ 1 ọnwa gara aga #606
M na-eme ka ị mara na e nwere ụzọ abụọ nke ụgbọelu na-ebugharị na sim freeware downloads na saịtị dị iche iche. Usoro mmemme ga-arụ ọrụ dịka ha chere na ọ gwụla ma ị kpebiri ihichapụ. Ọ bụrụ na ịga na nchịkọta nchịkọta nhọrọ maka iwepu windo ga-agbapụ na ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-agba ọsọ na ị ga-achọpụta na ihe niile amaala na faịlụ gị agaghị efu. Achọpụtara m na nke a oge mbụ m gara iwepu 2 afọ gara aga ma hụ na ihuenyo a na mgbe m hụrụ ụgbọelu m niile 3500 depụtara ma kpochapụ m enweghị ike ikwere ya. M kpọtụrụ saịtị ahụ ma me ka ha mara nke a ma a machibidoro m iwu na saịtị ahụ. Amaara m n'eziokwu na ọ bụghị onye mmebe ma ọ bụ onye mmemme n'ihi na eji m ngwaahịa ha n'oge niile 10. Ive nwara ụdị 2 a na-ebu ihe karịrị afọ atọ ma chọpụta faịlụ ndị nwere mmemme nchebe ngalaba na e nwere malware nke a na - akpọ sniperspy na onye a na - amaghị na data oge cryptic n'oge a. Sniperspy bụ usoro ebe ị na-etinye spyware n'ebe ọ bụla na oge ọ metụrụ ya na-eme ka onye na-ezigara ya na onye na-eziga ma gosipụta omume gị na ndụ gara aga nakwa yana ozi gị niile tinyere data nzuzo zoro ezo. M na-eme ka ị mara maka na anyị niile ejirila ọtụtụ oge rụọ ọrụ, nke a na-amalite (nke m na 2007.) Anyị niile esitela n'usoro ime ihe omume ahụ ihe ọ pụtara na ọ bụ na ọrịa na - agbalị mgbe niile ka ndị obodo mara N'ihi na ihe ndị a bụ ndị kachasị mma na sim dịka ndị na-ebugharị. Ive mere ka ị kpọtụrụ onye ahụ ma ọ bụrụ na o nweghị ihe ọ bụla. site na nsogbu ndị dị n'ụwa. Ọ bụ naanị otu nde na ndị agha na-emeri site na yahoo na ọrịa na-egosi na m ga-achọ ka nsogbu a niile nke ụwa kwụsị. gaa na obodo nke na-enye &% # @ !!! !!!!
Malware nke ga - ehichapụ gị FSX na FSXA 3 afọ 1 ọnwa gara aga #607
N'ezie, sniperspy bụ ngwanrọ nlekota oru nke nwere onwe ya site na ihe ọ bụla ọzọ.
Ị nwere ihe ọ bụla iji kwado azịza ndị a?
Malware nke ga - ehichapụ gị FSX na FSXA 3 afọ 1 ọnwa gara aga #610
Ihe niile ị ga - eme bụ ịga na ebe nrụọrụ weebụ ma gụọ data ndị na - enye ihe omume ahụ, ọ bụ nke ọma karịa nke 15 afọ, ya bụ usoro mmemme dị iche iche ji eme ihe, ụfọdụ n'ime iwu. Ọ bụ ya mere m ji zipụ ịdọ aka ná ntị ahụ, ma ọ bụrụ na enwere obi abụọ na ịchọta ọmarịcha ụgbọelu ndị a ma ama, dịka m kwuru n'oge gara aga, ọ bụghị akwụkwọ niile, ma amaghị m ihe ọ bụla ọzọ karịa usoro ahụ nke akọwapụtara m nledo. Echere m na ọ ga-aka mma ka ndị mmadụ mara ihe karịa ịhụ onwe ha. Eziokwu bụ na m nwere ike ime ka obi sie gị ike na ọ bụ ihe mere na anaghị m ịde blọgụ ma ọ bụ na-ekwu ihe ọ bụla. Mgbe a na-etinye m n'ọnọdụ iji gosipụta, ana m akpọ aha ndị na-eme mmebi ahụ, ma na nke a, amaara m na onye mmepụtara mbụ nke usoro ihe omume ma ọ bụ mmemme ahụ emeghị ya. O doro anya na achọrọ m ime ka saịtị ahụ mara ka ị ghara ịchụpụ ndị mmadụ. Agaghị m etinye ihe ọ bụla na saịtị gị, dị ka eziokwu nke dị na saịtị gị kemgbe mmalite ya, ọ bụ ezie na edepụtara m dị ka onye ọhụrụ. Abonyere m na 2008 ma ọ bụ 2009. Mụ na Microsoft na-arụ ọrụ site na ebe obibi na nkà na ụzụ ha na nsogbu na mgbasa ozi ọ bụghị naanị maka MSFS kama ihe ọ bụla na-aga n'usoro ihe omume Microsoft ma ọ bụ netwọk nke na-eme ka ọ bụrụ ọrụ na-aga na 98 pct nke kọmputa ụwa, na nke ahụ n'ihi na nnukwu nsogbu n'ihi na ọtụtụ kọmputa na-eji usoro MS. Nuff kwuru.
Malware nke ga - ehichapụ gị FSX na FSXA 3 afọ 1 ọnwa gara aga #612
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị mmadụ iduzi doro anya nke ụfọdụ downloads, gịnị mere na-agwa anyị ihe / ebe ha bụ ndị kama ịbụ ụma na-edochaghị anya?
Oge ike page: 0.358 sekọnd